UkuLolwa kunye nokuLwalela-i-NJ kunye ne-NY yearhente yeZindlu, eKhangela, uKhuselo lweNdawo yokuTyhilwa kunye namaGqwetha asebambisayo
ikhaya / Ityala kunye nolamlo
Ukulamla kungakho ngokuzithandela okanye ngokunyanzelekileyo. Nangona kunjalo, ukulamlela okunyanzelekileyo kunokuvela kuphela kummiselo okanye kwimvumelwano ekungenwe kuyo ngokuzithandela, apho amaqela avumayo ukubamba zonke iimbambano ezikhoyo okanye ezizayo kwi-arbitwer, ngaphandle kokwazi, ngokuthe ngqo, ukuba zingayintoni na ezo mbambano zexesha elizayo. Ukulamla kungabopha okanye kungabopheleli. Ukungamlamli okubophelelayo kuyafana nokulamla kuba isigqibo asinakubekwa maqela. Nangona kunjalo, umahluko ophambili kukuba umlamli azakuzama ukunceda amaqela ukuba afumane umhlaba ophakathi apho anokuthintela, umlamli (ongekho-ukubophelela) uhlala esusiwe ngokupheleleyo kwinkqubo yokuhlawula kwaye uya kunika kuphela isigqibo setyala kwaye, ukuba kufanelekile, isalathiso senani lomonakalo ohlawulelwayo. Ngenye intsingiselo imbambano iyabophela kwaye ukungabophisi kuyaluza ke ngoko, akububambano.